Stockholm: Kirada guryaha gacanta labaad oo cirka isku shareertay | Somaliska
Kirada guryaha gacanta labaad ee magaalda Stockholm ayaa cirka isku shareertay bilihii la soo dhaafay ka dib markii wax laga badalay sharciyada kireynta guryaha. Bilihii ugu horeeyay ee sanadkaan ayaa kirada guryaha gacanta labaad waxay korortay ilaa 20% taasoo ah siyaado aad u sareysa.
Arintaan ayaa ka dambeysay ka dib markii dowlada Sweden ay isbedel ku samaysay sharciyada kireynta guryaha gacanta labaad. Sharciga cusub ayaa fududeeyay in kirada lagu kordhiyo guryaha, taasoo ay muuqato in dad badan ay ka faa’ideysteen. Waxaa sidoo kale aad u kordhay guryaha gacanta labaad ee kirada loo doonayo.
Magaalada Stockholm ayaa waxaa ka jidha guryo la’aan aad u ba’an taasoo ay sababtay baahida aadka u balaaran. Liiska guryaha gacanta kowaad ee magaalada Stockholm ayaa noqday mid aad u balaaran iyadoo dadka qaarkood ay sugayaan guryaha 6-8 sano. Haddii ay sii socoto kor u kaca kirada guryaha gacanta labaad ayay nolosha Stockholm ku adkaan doontaa dad badan oo hada ku jira guryaha gacanta labaad.
Haddii aad ku nooshahay Stockholm nooga waran xaalada guriga aad ku nooshahay iyo kiradiisa?
aniga waxan daganahay Stockholm wan ka guuraya sweden ama waxan kawada in muuda ayan maqnanaya ee walalayal qof wanagsan oo aan ku warejiyo guurigayga wa 2 hurda iyo fadhiigi musqushi kuushiinki oo weyn qofka igala warigayo aya bixinayo kiirada iyo koorontada inta wixi fahfahin dher ha laxariiro jimcale isaga aya garanayo meshan daganahay wabilahi tuufiq walalaha somaliyad
asc xaliima walal wan ku salamayaa waxan u bahnaa gurigaa kirada u rabtaan walal donaya walal halkeen kala so xidhidhaa wan ku salamaya emailka igo soo dir tel an kala so xidhidho walal adigoo mahadsan asc
Xalimo walalo guri Miyaa dadka kuwarejineysaa mise ijaar bes rabtaa tan kale xaguu ugu yalaa Stockholm
Acs. Xliimo waallo anig ayaaaa u baahan maadam aan hada ahay nin dhalin yaro ah oo caruurtiisa loo soo wado maadam aan awoodin goronto in aaan dhiibo arintaas maxaaa iga oran kartaaaaa ???
to Arab walal guuriga iyo korontada wa isku xiran yihin xita hadii aad isticmalin wad iskagaranaysa oo wax yarna alaha kadhigi wa sotuuraya tankale waxan lahadlaya walashay fardowsa haa abaayo wan solabanaya oo marabo in aan iskawarajiyo guuriga dhan wa qofkii donayo gacan labad ayan kawada ila 2 sano 3 sano kiiraduna ma badna wad iska dareemaysa Stockholm qiimaheda
Xaliimo waan ku salaamayaa… Guriga anigaa u baahan.. Shaqo fasti ah waan heeystaa.. kan du ring mig snäll 0769772677 mise maaseej iigu soo qor nomberkaaga aniga kula soo xiriirayo walaasheey
asc walalyaal waxaan idiin hayaa guri qol iyo jiif niki daneeynayo ha igala soo xariiro cinwankan wabilahi towfiiq. OGEYSIIN
GURIGA WAAN WAREJINAYA WADANKA AYAN KA GURAYA XAFADA UU KU YAALLO WA MÄRSTA ASC
asc walal nabiil wan ku salamayaa waxan danaynayaa guriga ka gurayso walal hadad emailkayga aragto iiso jawab ma haystto yeel mesha kuma qorno wan ku so waci laha insha alaah jwab ayaan ka sugaya asc
nabiil walaal telkaaga soo sheeg plz aniga ubaahan guriga.
Jimcaale nootaayadii baar ubax maa halkaan loo soo wareejiyay?
Waa salaamantihiin kuligiin, tan labaad asxaabta 2sano yaa aqbaar cusub haayo. Fadlan nosoo gudbiya idinkoo aad umahadsan. Shukran dhamaantiin
asxaabta arinki 2da sano maxaa kasoo kordhay baryahan.
Aniga afarqol oo kiro ah oo suuqa madoow ah ayaan hayaa yaa rabo, sxb, iga raalli ahaado run ma ah waxaan sheegayo lakin jimcaale wixii uu na weydiiyey an ka jawaabno waa maxay beecinta guryaha,
maxa mesha kawanka malayga ka dhigteen maxa guri iyo gorgortankisa ma wuqoyiga dagtin hada sas u gurya jeceshihin ani västerås daganay aqyar qofki rabaa guri ha ila so xirir wblh
Walal xaliimo iyo nabiil midkiin haduu iga kireen karo anaa u baahan plz numberkryga ayaan kuusoo qori walaal.
guriga aniga u baahan sxp waxaan ahay wiiil xaas ah hal cunug ban haysta markaa ma igu wareejin karta aniga numberkagyu waa 0727807721